wararka maanta-arlaadii.net » Nin aan Kuu Furi Doonin, Yuu Kuu Rarin!
Nin aan Kuu Furi Doonin, Yuu Kuu Rarin!
Waa Maah Maah Soomaaliyeed oo qota dheer, murtidey xambaarsan tahayna tahay, qofka aan kula masiirka ahayni inuu dantaada baylihiyo ay u badan tahay.
Soomaalidu sideey u kala qaxday waxaa dalka dib ugu soo laabtay soomaali badan oo loo baxshey “qurba joogta” ama “Diaspora”.. Dalkana shaqa usoo doontay. Waxaana dhacda mararka qaar ineyba Barlamaanadana Nus ama ka badan noqdaan, Dawladahana Kala bar ama ka badan, heer gobol ama heer Federaal. Waa Muwaadiniin Soomaali ah, xaqna u leh iney xilal ka qabtaan dalkooda, kana shaqeeyaan.
Laakiin dhibku wuxuu ka dhacayaa, qofkii kula makaan iyo masiir maaha, lugna dalkuu ku hayaa, lugina banaankey u taalaa. Isagu inta badan waa fududyahay, hoteel buu deganyahay, ukumahana (xaaska iyo caruurta) bannaankuu soo dhigtay.. Hadey xaalladu xumaato baasaboor kale ayaa jeebka ugu jira oo saacada ka dib dalkaba ma joogo!
Arrinkaasu aragtidayda qayb weyn ayuu ka yahay dhibaatada siyaasadeed ee dalka haysata.
Waxaan u malaynayaa tala wanaagsan iney ahaan lahayd Muwaadin kasta oo xil doonaya dalka inuu ka qabto, gaar ahaan xilalka muhiimka ah, sida wasiiro, ku xigeenno, xildhibaanno, saraakiil sare, iwm, in shardi looga dhigo:
1) Inuu dalka degganyahay, xaaskiisa iyo ilmihiisuna dalka kula suganyihiin, oo dadka ay xukumaan dhib iyo dheefba la qabaan.
2) Haddii loo arko jagooyinka qaarkood, in loo shardiyo inuu ka tanaasulo jinsiyadda kale ee uu qaatay, maadaama aanu isku wadi karin oo masaalixdu iska hor imaneyso waxa loo yaqaan (Conflict of Interest) ama (Dano is herdinaya).
Hadey Gacan iigu jiri lahayd go’aankaa waan qaadan lahaa, laakiin maanta inta badan (Qurbajoogtu) ilma (Diaspora) iyagaa umuurta gacanta ku haya oo dheg inoo jalaq siin maayaan, arrintuna dhaafi meyso (Niman kuu furi doonin yuu kuu xirin).. Allaha Sahlo..
Bilow Keerow iyo xildhibaano kale oo lagu xirey Nairobo oo la sii daayay
Daawo Jaaliyada Beelweynta Geledi Ee Boqortoyada Sacuudiga Oo Si Kulul Ugu Hadlay Dhibatoyinka Afgooye Uu Ku hayo Maamulka Shariif Xsan